ရုပ်မြင်သံကြားမှလိင်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစတင်ခြင်းကိုခန့်မှန်းသည် (၂၀၀၄) - Your Brain On Porn
ရုပ်မြင်သံကြားအပေါ်လိင်အကဲခတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (2004) ၏ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုစတင်ခန့်မှန်း
ရေဗက္ကာအယ်လ် Collins, မာ့ခ် N. Elliott သည်+4စာရေးဆရာများ Angela Miu
ကလေးအထူးကု 2004 Published in ပြည်တွင်းသတင်း
Doi:10.1542 / peds.2003-1065-L ကို
အစောပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစတင်အရေးပါတဲ့လူမှုရေးနှင့်ကျန်းမာရေးကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးမီကစစ်တမ်းအများဆုံးလိင်ကြုံတွေ့ဆယ်ကျော်သက်သူတို့လိင်ဆက်ဆံမှုရှိသည်ဖို့ကြာကြာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ကြဆန္ဒရှိကြောင်းအကြံပြု; အခြားဒေတာ unplanned ကိုယ်ဝန်နှင့်လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများအစောပိုင်းကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုစတင်သူတို့တွင်ပိုပြီးဘုံဖြစ်ကြောင်း။ ညွှန်ပြ ကလေးအထူးကု၏အမေရိကန်အကယ်ဒမီဖျော်ဖြေရေးရုပ်မြင်သံကြား (TV ကို) အပေါ်လိင်၏ပုံဖော်ခြင်း ပတျသကျ. ဆယ်ကျော်သက်လိင်အထောက်အကူပြုစေမည်အကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ တီဗီအစီအစဉ်များ၏ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်သုံးပုံနှစ်ပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများပါရှိသည်။ သို့သော် TV နဲ့ဆယ်ကျော်သက်ရွယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအပေါ်လိင်မှထိတွေ့မှုများအကြားဆက်ဆံရေးကိုဆန်းစစ်ပင်ကိုယ်မူလ data ကိုကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ဆိုးကျိုးများများ၏ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဘို့အရှားပါးခြင်းနှင့်မလုံလောက်ဖြစ်ကြသည်။ ဒီဇိုင်းနှင့်
ကျနော်တို့အသက် 1792 နှစ် 12 မြီးကောင်ပေါက်များ၏အမျိုးသားရေး longitudinal စစ်တမ်း, 17 ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အခြေခံနှင့် 1 နှစ်နောက်ဆက်တွဲအင်တာဗျူးများတွင်ပါဝင်သူသူတို့ရဲ့တီဗီကြည့်အလေ့အထများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံအစီရင်ခံခြင်းနှင့်ဆယ်ကျော်သက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစတင်နှင့်ဆက်စပ်ခံရဖို့လူသိများတစ်ဒါဇင်ကျော်အချက်များ၏အစီအမံမှတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ တီဗီကြည့် data တွေကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာထိတွေ့မှု၏အစီအမံ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်များသို့မဟုတ်ဘေးကင်းပုံဖော်ရိုက်ကူးမှုနှင့် (လိင်ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမအပြုအမူနှင့် ပတ်သက်. ဆွေးနွေးချက်နှိုင်းယှဉ်) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ပုံဖော်ရိုက်ကူးမှုရယူထားခြင်းမှတီဗီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတစ်ခုသိပ္ပံနည်းကျဆန်းစစ်၏ရလဒ်များကိုနှင့်အတူပေါင်းစပ်ခဲ့သည်။
တစ်ဦး 1 နှစ်ကာလအတွင်း noncoital လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအဆင့်များတွင်လိင်ဆက်ဆံမှုနှင့်တိုး၏စတင်။
Multivariate ဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအခြေခံမှာပိုပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကြည့်ရှုအားပေးသူကိုမြီးကောင်ပေါက်မဟုတ်ရင်သည်ဤဆက်ဆံရေးကိုရှင်းပြအံ့သောငှါတုံ့ပြန်ဝိသေသလက္ခဏာများများအတွက်ထိန်းချုပ်ရန်, နောက်ဆက်တွဲတစ်နှစ်ကာလအတွင်းပိုမိုအဆင့်မြင့် noncoital လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများမှလိင်ဆက်ဆံမှုများနှင့်တိုးတက်မှုအစပျိုးဖို့ပိုဖွယ်ရှိကြောင်းကိုညွှန်ပြ။ ညှိပြီးလိင်ဆက်ဆံမှုအကျိုးသက်ရောက်မှု၏အရွယ်အစားတီဗီလိင်ကြည့်ရှု၏ 90th ရာခိုင်နှုန်းအတွက်လူငယ်များသည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်အဆိုပါ 10th ရာခိုင်နှုန်းထဲမှာလူငယ်နှစ်ဆခဲ့တာဟာလိင်ဆက်ဆံစတင်တစ်ဦးခန့်မှန်းဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်လို့ထိုကဲ့သို့သောကြီးအားလုံးအသက်အရွယ်များအတွက်လေ့လာခဲ့သည်။ သာလိင်အကြောင်းပြောဆိုပါဝင်သည်ကြောင်းတီဗီမှ exposure လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူပုံဖော်ကြောင်းတီဗီမှထိတွေ့မှုကဲ့သို့တူညီသောအန္တရာယ်များနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်များသို့မဟုတ်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုပိုမိုပုံဖော်ရိုက်ကူးမှုနောက်ဆက်တွဲနှစ်တွင်လိင်ဆက်ဆံမှုစတင်ရန်လျော့နည်းဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်စောင့်ကြည့်သူကိုအာဖရိကန်အမေရိကန်လူငယ်များသည်။
တီဗီပေါ်တွင်လိင်အကဲခတ်ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်ဆယ်ကျော်သက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစတင်အလျင်အမြန်လိမ့်မည်။ , ဖျော်ဖြေရေးပရိုဂရမ်းမင်းအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာပမာဏကိုလျှော့ချဤအကြောင်းအရာဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုထိတွေ့မှုလျှော့ချခြင်းသို့မဟုတ်မှကိုးကားတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုဖြစ်နိုင်သောအနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များ၏ပုံဖော်ရိုက်ကူးမှုနျဖိုးထား coital နှင့် noncoital လှုပ်ရှားမှုများ၏စတင်နှောင့်နှေးနိုင်ဘူး။ တနည်းအားဖြင့်မိဘများဟာသူတို့ရဲ့ဆယ်ကျော်သက်ကလေးများနှင့်အတူတီဗွီကြည့်လိင်နှင့်ပုံဖော်သည့်အပြုအမူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်ချက်ဆွေးနွေးခြင်းအားဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ၏သက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ကလေးအထူးကုကဤမိသားစုဆွေးနွေးမှုများအားပေးသင့်ပါတယ်။